नेपाल आज | दशैंमा १० पैशा दक्षिणा पाउँथ्यौं (भिडियोसहित)
दशैंमा १० पैशा दक्षिणा पाउँथ्यौं (भिडियोसहित)
चर्चित राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा. सुरेन्द्र केसीसँग हामीले यसपटक दशैं सम्वाद गरेका छौं । नेपालआजका लागि डा. केसीसँग दशैं सम्वाद गर्दा धेरै रोचक विषयहरु खोतलिएका छन् । पहिलेको र अहिलेको दशैं, संस्कृति र परम्पराबारे डा. केसीले राख्नु भएको धारणाको सार उहाँकै शैलीमा निम्नानुसार छः
‘दशै भनेको चिरप्रतिक्षीत विषय हुन्थ्यो । पिङ खेल्ने, हाटबजार जाने, मामाघर जाने, ससुराली हुनेले ससुराली जाने हुन्थ्यो । कोसेलीपात आउने जाने, आफन्त भेट आदिका कारण महत्वपूर्ण हुन्थ्यो । परिवेश नै रमाइलो हुन्थ्यो । सुन्दर घाम, मनोरम दृष्य, लहलह धानका बाला, खेती राम्रो हुने, गाइवस्तुले पनि आराम पाउने बेला हो । वरपर हरियालीको समय पनि हुन्थ्यो । दशैले परिवेश नै बदलिदिन्थ्यो । उल्लास नै फरक हुन्थ्यो । पहिलेको र अहिलेको दशैंमा जमिन आसमानको फरक छ ।
गाउँघर र सहरी जीवन प्रणालीमा अहिले पनि फरक छ । गाउँमा पनि केही सहरी प्रवृत्ति प्रवेश गरेको भने छ । ९८ प्रतिशत भागमा मोबाइलको पहुँच भइसकेको छ । गाउँमा पनि अब मानिसहरु धेरै कुरामा जागरुक छन् । ६० प्रतिशत भन्दा बढी मानिस गाउँमा बस्छन् । सारा पहुँचहरु, सडक सञ्जाल, सुविधाहरु गाउँमा पनि पुगेका छन् । त्यो बेला चाहिँ, हाम्रै गाउँमा पनि खसी काट्ने भनेको चैते दशैं, साउने संक्रान्ति, दशै र माघे संक्रान्तिमा मात्रै हो । चार पटक मासु खाने अरु बेला सम्भव हुँदैन थियो ।
मासु मजाले खान दशै
मासु मजाले खान दशै नै पर्खनु पर्ने हुन्थ्यो । त्यसमा त दुई मत छैन । सामान्य परिवारले पनि दशैंमा खसी घरमै ढाल्थे । आउँदो दशैंका लागि अहिलेदेखि नै खसीको जोहो गरिन्थ्यो । मेरै घरमा पनि त्यस्तै थियो । धेरै बाख्रा पाठा पालिदैन थियो । हाम्रैमा गाईको गोठ, भैसी र बाख्राको खोर थियो । कुखुरा, परेवा र हाँस पनि थिए । कुखुराको फुलदेखि बाख्रोको पाठादेखि भैसीको दूध सबै बेचबिखन गर्ने र नगद आर्जन गर्ने गरिन्थ्यो । गाउँघरमा नगदको धेरै काम हुँदैन थियो । तर चाहिन्थ्यो । पढाईका लागि वा सहर आउँदा नगद चाहिन्थ्यो । म आउँदा पनि ३–४ सय भन्दा बढी पैसा लिएर म सहर आएको थाहा छैन । मेरो घरमा एक पाथी जति दूध उत्पादन हुन्थ्यो । त्यो दूधबाट बनेका परिकार बेचेर नगद आय हुन्थ्यो । तर धेरै पालिदैन थियो । निर्वाहमूखी मात्रै हुन्थ्यो । व्यवसायिक हुँदैन थियो । कृषिजन्य उत्पादनहरुलाई सामान्य मूल्यमा बेचिन्थ्यो । बजार लगेर बेच्ने चलन खासै थिएन । मधेसमा भने छ । तर पहाडमा भने त्यस्तो हुँदैन थियो । गाइगोरु, बाख्रा भैसीहरु घरबाटै बिक्री हुन्थे ।
क्षेत्री बाहुनले खसी, नेवाहरुले राँगा
यो पल्ट खसी ढालेपछि अर्को वर्षको अर्को दशैं खसी घोषणा हुन्थ्यो । त्यसलाई अन्न राम्रो दिन्थे । नेवारहरुले पनि राँगा पाल्थे । सबैको चलन त्यही थियो । किनेर ल्याउन सकिदैन थियो । पैसा पनि हुँदैन थियो, बेच्ने व्यापारी पनि हुँदैन थिए ।
हामी चाहिँ अलि फरक परिवारका थियौं । पूर्णतः कृषि समर्पित नभई राजनीतिक खालको परिवार भएको हुनाले शिक्षामा बढी जोड दिने परिवार थियो । हाम्रोमा काम चलाउ मात्रै हुन्थ्यो । चाहिने जति स्याहार गर्दैन थियौं । हाम्रो समय पढाईमा खर्च हुन्थ्यो । त्यही भएर गाईवस्तुले राम्रो स्याहार पाउँदैन थिए । छिमेकहरुमा जस्तो राम्रो गाइवस्तु हुँदैन थिए । अरुका पोटिला, हाम्रा दुब्ला हुन्थे । मेरै काकाकोमा गाईवस्तु पोटिला हुन्थे ।
हाम्रो बेलामा सबैभन्दा ठूलो उत्साह भनेको मामाघर जाने भन्ने हुन्थ्यो । कहिले दशैं आउला र मामाघर जाउँला भन्ने हुन्थ्यो । मामाघरमा हामीलाई प्यारो गर्नु हुन्थ्यो । समस्या के हुन्थ्यो भने हामी भाञ्जाभाञ्जी गरेर १० जना थियौं । यो पटक को मामाघर जाने भन्ने हुन्थ्यो । १० जना नै मामाघर जान मिल्थेन । घरको कामको पनि जिम्मेवारी हुने गथ्र्यो । बुवा हुँदै दुई पटक म मामाघर गएको स्मरण छ ।
बढीमा १० पैशा पाउँथ्यौं । तामाको डबल हुन्थ्यो । तीन पैशामा एक मुठी सितलु मीठाई आउँथ्यो । अर्को गोलो मीठाई पनि आउँथ्यो ।
खसी काट्ने, राम्रो कपडा लगाउने, पिङ खेल्ने, यस्तै यस्तै हुन्थ्यो । अहिले त सबैजसो चाडमा विकृति आएको छ । रक्सी खाने, तास, होहल्ला, पटका, तडक भडक, प्रतिस्पर्धा यस्तो चलन आएको छ । मलाई विकृति मन पर्दैन । फागु, तीज, बाटामा डोरी राखेर पैसा माग्ने, शिवरात्रि प्रतिबन्ध नै लगाइदिए हुन्छ । यी चलन र पर्वमा विकृति आयो । तिहारमा पटका पड्केको देखेर मलाई कहाँ जाउँ जस्तो हुन्छ । तराईको संस्कृति काठमाडौमा आइरहेको छ । बाहिरी संस्कृतिको प्रभाव काठमाडौमा आइरहेको छ । तीजकै कुरा गरौं न । भदौंमा तीज पर्छ सामान्यतः । तर सुरु हुन्छ साउनदेखि नै । यस्तो प्रवृत्ति देखेर अनौठो लाग्छ । दुई दिनको तीज अहिले एक महिना मनाउन थालिएको छ ।
दशैमा ढोल बजाउने
दशैमा ढोल बजाउने चलन सुदूरपश्चिमा राज्य रजौटाहरुको प्रभूत्व भएको ठाउँमा बजाउने गरिन्थ्यो । अहिले हेर्दा म आफै इतिहासको विद्यार्थी हुँ । अहिले मात्रै मलाई सुदूरपश्चिमको खस संस्कृतिसँग आकृष्ट भइरहेको छु । अहिले जाति, जनजातिका कुरा आए । प्रथा, परम्परा, चाडपर्वका बारेमा खोजी हुन थाल्यो । सबैका आ–आफ्ना संस्कृति छन् । खस संस्कृति भनेको चाहिँ के हो त ? यो बुझ्न जरुरी भएको छ । खस समाजमा कायम भएको ढोल प्रथा हो । गत वर्ष बम्बै गए । धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रममा गएँ । त्यहाँ सुदूर पश्चिमका दलितहरुले आफ्नो नृत्य गरेको थियो । मलाई सबैभन्दा आकर्षक त्यही लाग्यो । जुन कुरा मलाई नेपालमा थाहा पनि पाएको थिइनँ । बम्बैमा गएर थाहा पाएँ । हामी सुदूरपश्चिमबाट विस्थापित भएर पूर्वमा आयौं । उताको संस्कृति छाडेर यताका जनजातिको संस्कृति लियौं । एउटा समान्य चाडपर्वको रुपमा हामीले संस्कृति बुझ्न थाल्यो ।
मूलतः हिन्दु पर्वको रुपमा आएको छ । तर यो दशैं भनेको विजयादशमीको रुपमा घटीत भएको देखिन्छ । खसको मस्टो संस्कृति हो । खसको अलग संस्कृति हो । दशैसँग जोड्दा यो पर्वलाई आफ्नो आफ्नो तरीकाले अपनाउने चलन छ । यो पर्वलाई भारतमा दशहरा पनि भन्छन् । दूर्गापूजाको रुपमा पनि मनाईन्छ । हामी यसलाई दशैं भन्छौं । कतै बडादशैं पनि भन्ने गरिन्छ ।
दशैं भन्ने कुन विन्दुमा कहिले कसरी शुरु भएको भन्ने ऐतिहासिक सामाग्री छैनन् । किम्बदन्ती र शास्त्रीय आधारमा मात्रै हामीले भन्ने गरेका छौं । राम भनेको आर्यन, रावण भनेको अनार्य मानिन्छन् । आर्यजातिले अनार्य जातिमाथि विजय प्राप्ति गरेको विजयोत्सव मनाइएको भनेर पनि अहिले केहीले दशैं मनाउन हुँदैन भनिएको हो ।
खसी ढाल्ने चलन
गाउँघरमा मात्रै दशैं वास्तविक रुपमै दशै आउँछ । दशैं आउने भनेको नै गाउँ घरमा हो । सहर बजारमा चाहिँ दशैं भन्ने एउटा अतिरिक्त पर्वका रुपमा मनाउने गरिन्छ । काठमाडौं दशैमा सुनसान हुन्छ । मलाई चाहिँ सही अर्थमा दशैं यहि बेला पाउँछौं । होहल्ला, चित्कार हुँदैन दशैमा । शान्त जीवन पाइन्छ दशैमा । म त यहि बेला राम्रोसँग लेखपढ गर्न पाउँछु । दौडधुप हुँदैन, पत्रपत्रिका पढ्नु पर्दैन । आरामले मनाउन पाइन्छ । मेरो हकमा चाहिँ यस्तो लाग्छ । २५ वर्षअगाडिसम्म हरेक घरमा खसी काट्ने चलन थियो ।
मेरा पनि केटाकेटी सानै थिए । उनीहरुको खुसीका लागि मैले पनि खसी ल्याउँथे । घरमै काट्ने रमाइलो गर्नु पर्ने बाध्यता थियो । तर यो २५ वर्षमा धेरै कुरा बदलिएको छ । अर्को घरमा खसी आएपछि हाम्रो घरमा खै ? भनेर सोधिहाल्थे । पछि मैले छोराछोरीलाई सम्झाउन थाले । दुई तीन कारणले राम्रो होइन भनेर सम्झाउन थाले । धेरै मासु राम्रो होइन । धेरै मासु घरमा राख्दा त्यो स्वस्थकर हुँदैन, घरमा फोहोर हुन्छ भनेर सम्झाउन थाले । शुरुका तीन वर्ष त केटाकेटीले मानेनन् । पछि उनीहरु अलि बुझ्ने भए । अनि खसी नकाटे पनि हुने भयो । मासु नै ल्याएर खान थालियो । अहिले देख्दा देख्दै विरलै अब खसी घरमा काटिन्छ । सबैले खसी घरमा काट्न छाडियो । काठमाडौंमा यो चलन धेरै हरायो । गाउँ घरमा अझै चलन छ । खसीको मासु धेरै खानु राम्रो पनि होइन ।
दशैं प्रा. डा. सुरेन्द्र केसी इतिहास र अनुभुति
अदालतको अवहेलनामा प्रधानमन्त्री विरुद्ध सर्वाेच्चमा निवेदन
प्रधानमन्त्रीको प्रश्नः सांसद भनेको पाँचै वर्ष खान पाउनुु पर्ने स्थायी जागिर हो ?’
प्रचण्ड–माधव रुपी दुईटा गोरु दाम्लो चुडाएर भागेपछि गोठमा शान्ति छः महेश वस्नेत